Posted on Sep 05 2020
काठमाडौं। एनसेल आजियाटाले एसइइका विद्यार्थीका लागि विशेष योजना ल्याएको छ। योजना अनुसार विद्यार्थीले एक रुपैयाँमा प्रिपेड सीम खरीदका साथै निःशुल्क माइ फाइभ सेवा र बोनस डेटाको फाइदा पाउने कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा..
एजेन्सी । संसारभर लोकप्रिय भिडियो राख्‍ने मिल्‍ने सामाजिक सञ्‍जाल टिकटक एप्लिकेसन भारतमा बन्द भएपछि र संसारभरि नै यसको प्रभाव कम हुँदै गएको बेला त्यस्तै प्रकारको तर त्यो भन्दा झन् प्रभावकारी..
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिएको छ । कोषमार्फत विभिन्न परियोजनामा ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले..
एनसेलले ल्यायो ‘कल आयो पैसा पायो’ अफर, १ कलको २० रुपैयाँसम्म बोनस
काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो कस्टमर लोयल्टी कार्यक्रम अन्तर्गत ग्राहकहरुले मन पराएको ‘कल आयो पैसा पायो’ अफर यो वर्ष पनि अझ बढी बोनसका साथ ल्याएको छ । यस योजना..
एनसेलका प्रयोगकर्तालाई ८० प्रतिशत सस्तोमा डाटा
काठमाडौं । एनसेलका सबै मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले अब बढी शुल्क लाग्ने कुनै डर बिना ढुक्कसँग मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डाटा सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले नयाँ डाटा..
काठमाडौं । सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन (आईपीटीभी) सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले आगामी वैशाख १ गतेदेखि आफ्ना ग्राहकलाई इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउन..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले लार्ज डाटा प्याक उपलब्ध गराउने भएको छ । यो प्याक एक पटक सब्स्क्राइब गरे पछि लामो समयसम्म चलाउन पाइन्छ र तुलनात्मक रुपमा निकै सस्तो पर्ने कम्पनीले..
काठमाडौं। एनसेलले प्रणय दिवसका अवसरमा स्पेशल अफर ल्याएको छ। कम्पनीले प्रिपेड ग्राहकका लागि भ्यालेन्टाइन अफर ल्याएको हो। कम्पनीले 'अझै नजिकिन्छ सम्वन्ध' योजना अन्तर्गत करसहित सय रुपैयाँमा ७ सय मिनेट टक टाइमको..
काठमाडौं। फेसबुक, ट्वीटर, युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन गैरकानुनी भएको भन्दै कसैले गरेमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्पोरेट संस्था, होटल रेष्टुरेन्ट तथा..
Posted on Jan 02 2020
एजेन्सी । अमेरिकी सेनाले कार्यालय प्रयोजनका मोबाइल फोनमा टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । चिनियाँ कम्पनी बाइट डान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटक एपबाट साइबर खतरा रहेको भन्दै कार्यालय प्रयोजनको मोबाइलमा प्रतिबन्ध लगाइएको..
काठमाडौं। एनसेलले सन् २०२० को उपलक्ष्यमा डेटा प्याकमा स्किम ल्याएको छ। एनसेलका ग्राहकले ५० प्रतिशत छुटमा मासिक डेटा प्याकहरु सुचारु गर्न सक्ने छन्। एनसेलका प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले ५० प्रतिशत छुटमा..
भायनेटले ल्यायो २० एमबिपिएसको नेट एघार हजार ४ सयमै
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा भायानेटले ‘ट्रिपल ट्वान्टी अफर’ अन्तर्गत २० एमबिपिएसको नयाँ इन्टरनेट योजना ल्याएको छ। सो योजनाअनुरूप ग्राहकले एघार हजार ४ सयमा २० एमबिपिएस क्षमताको नेट पाउनेछन्। यो..
नयाँ वर्षमा टेलिकमका प्रिपेड ग्राहकलाई थप यस्ता छुट सुविधा
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले बिक्री–वितरण गर्दै आएको नयाँ जीएसएम÷सीडीएमए प्रिपेड सिमकार्डमा ५० रुपैयाँको ब्यालेन्स उपलब्ध हुने गरेकोमा अब त्यही मूल्यमा ब्यालेन्स तथा थप सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । आगामी २०७६..
एनसेलको १० रूपैयाँमा रातभरी कुराकानी गर्न सकिने अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक आयो
काठमाडौं। एनसेलका प्रिपेड ग्राहकहरूले अब एनसेल नेटवर्कभित्र सस्तो दरमा कुराकानी गर्न पाउने भएका छन्। एनसेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना साथीभाई तथा आफन्तसँग रातिको समयमा अझै सुलभ दरमा असिमित कुराकानी गर्न..
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको रुचीलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ । यस अन्तर्गत निश्चित दिनका लागि भ्वाइस वा डाटा..
Posted on Dec 01 2019
काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दक्षिण एशियाली खेलकुद ९साग० हुने सबै खेलस्थानमा खेल अवधिभर उच्च गतिको इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट लगइन गरेर दैनिक १..
काठमाडौं । शुक्रबार बेलुका टेलिकमले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा एउटा प्रेमिल स्टासटसहितको फोटो पोष्ट गर्‍यो । जसमा रातमा सस्तो दरको प्याकेज लिएर आफ्ना प्रियजनसँग अधुरा रहेका बातचित पुरा गर्न भनिएको..
एनसेलको बोनस डेटा लिँदा निःशुल्क युट्युब भिडियौ हेर्न सकिने
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि आकर्षक बोनस डेटा योजना ल्याएको छ । बोनस डेटा प्राप्त गर्दै निःशुल्क युट्युब भिडियो स्ट्रिमिङको मजा लिन सक्ने गरिको योजना ल्याएको हो । यो..
आइफोन ११, ११ प्रो र ११ प्रो म्याक्स नेपाली बजारमा, कति पर्छ मुल्य ?
काठमाडौं । शुक्रबारबाट आइफोन ११, ११ प्रो र ११ प्रो म्याक्स नेपाली बजारमा आएको छ। एप्पलको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक जेनरेशन नेक्स्ट कम्यूनिकेसनले उक्त आइफोन सार्वजनिक गरेको हो। ६४ जिबी आइफोन..
नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार, पहिलो पटक २ सय एमबी डाटा र सिम निशुल्क
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नेपालभरका विभिन्न सहरहरुमा फोरजी सिम वितरण, परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । कात्तिक २० मा बिर्तामोडबाट सुरू भएको अभियानको पहिलो चरणको..
काठमाडौं । एप्पल नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जेनेरेसन नेक्स्टले आगामी शुक्रबारदेखि आइफोन इलाभेन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आइफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो, इलाभेन प्रो म्याक्स बजारमा आउन लागेको हो। नयाँ फोन किन्दा..
एनसेलले १ रुपैयाँमा कल गर्न मिल्ने ‘अल नेट भ्वाइस प्याक’ ल्यायो
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले ‘अल नेटवर्क भ्वाइस प्याक’ अफर संचालनमा ल्याएको छ। यस अन्तर्गत ग्राहकले कर बाहेक प्रति मिनेट १ रूपैयाँमा देश भित्रको सम्पुर्ण नेटवर्कमा कल गर्न सक्छन् । यो..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेजसहितको अटम ल्याएको छ। उक्त अफर बिहीबारदेखि ९० दिनसम्म लिन सकिने टेलिकमले बताएको छ। टेलिकमले यसअघि उपलब्ध गराएको समर अफरअन्तर्गतका प्याकेजमा केही थप..
एनसेलको ‘अनलिमिटेड रोमिङ डेटा प्याक’
काठमाडौंं । एनसेलका ग्राहकले अब विभिन्न १० देशहरुको भ्रमणमा रहँदा बिना कुनै झन्झट सुलभ दरमा डेटा रोमिङ सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । एनसेल प्रालिले आफ्नो आकर्षक ‘अनलिमिटेड रोमिङ डेटा प्याक’..
नेपाल टेलिकमको फोरजी चल्ने यू सीम नि:शुल्क, १५ गतेबाट २६ शहरमा चल्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले असोज १५ गतेदेखि देशभरका २६ वटा ठूला र साना सहरमा फोरजी सेवा सुरु गर्ने भएको छ। टेलिकमले फोरजी सेवाको आफ्नो पहिलो परियोजना अन्तर्गत १५ असोजदेखि सो..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विजया दशमीको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरुमा विभिन्न आकर्षक छुट उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले फोरजीरएलटीई र अन्य सेवाहरुमा विशेष छुट सहितका..
एनसेलको नयाँ भर्सन पीआरबीटी आफ्नै धुन शुरू
काठमाडौं । एनसेल प्रयोगकर्ताले अब आफ्नै धुन रेकर्ड गरी आफ्नो प्ले ब्याक रिङ्ग टोन (पीआरबीटी) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । कम्पनीले सोमवार सार्वजनिक गरेको नयाँ योजनाअनुसार, अब पीआरबीटीको रुपमा आफ्नै..
संविधान दिवसमा नेपाल टेलिकमले ल्यायो विशेष अफर
काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले नयाँ अफर ल्याएको छ । यही असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइन लागेको अवसर पारेर टेलिकमले १ सय रुपैयाँमा ३ जीबी डाटा उपलब्ध गराउने..
शेन्जेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिनुअघि नै सम्भावित खतरालाई विचार गरी हुवावेले प्रविधि अनुसन्धानका कार्यमा लगानी बढाएको छ । अमेरिकी..
काठमाडौं । सुबिसु केबलनेट प्रालिले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमै इन्टरनेट वा क्लियर टिभि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । यस प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकहरुले मात्र रु..
Results 402: You are at page 1 of 14